Yini okusha in Gnome 3.20 | Kusuka kuLinux
pedrini210 | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Aplicaciones, I-GNU / Linux, Izaziso
Indawo edumile yedeskithophu I-Gnome, ye-GNU / Linux, ivele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule nokwethulwa kwenguqulo yayo entsha, okuyi- uhlelo lwayo lwe-3.20 Simbozwe iqembu elikhulu lezici ezintsha ezizohambisana ne-edishini "3" yalolu hlelo.
IGnome yakhelwe ukuze ideskithophu yakho iphathwe ngaphansi komqondo omuhle futhi olula kakhulu wokusebenzisa. Ngaphandle kokushaya indiva ukuphathwa kohlelo, ingasaphathwa eyokuphepha.
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha zomsebenzi kuyaziwa ukuthi le nguqulo yakamuva yeGnome 3 ibiziwe "Delhi", njengendlela yokuqashelwa eqenjini lonjiniyela abavela e-Asia. Njengoba lolu hlelo, kufanelekile ukulukhumbula, lusekelwa onjiniyela emhlabeni jikelele. Amaphoyinti okushintsha angama-28933 alungiselwe uhlelo, kepha ngokujwayelekile singagqamisa ukuthi kube nezinguquko kusuka kusoftware, ekufuneni amafayela nokufinyelela kwimfihlo.
Manje, sizokutshela ngokuningiliziwe ngezinguquko ezibaluleke kakhulu ezenzelwe le nguqulo 3.20:
Ukuvuselelwa kwesistimu esebenzayo
Uma sikhuluma ngezibuyekezo zesoftware eGnome, lokhu kwenziwa njalo ngaphandle kwezinkinga ezivela kuhlelo lokusebenza lwesoftware. Kepha kulokhu kungeniswa, inguqulo entsha ivumela izibuyekezo ezivela ohlelweni lokusebenza. Okusho ukuthi isidingo sokusebenzisa ithuluzi lokuyala noma ukwenza ukufakwa kabusha kohlelo, ukuthola inguqulo entsha yalokhu, kuzoba yinto yesikhathi esedlule. Manje iGnome ikuvumela ukuthi ube nezaziso zezinguqulo ezintsha zohlelo lokusebenza, ukuze uzilande kamuva. Uzokwazi ukuba nolwazi ngenqubekela phambili yokulanda, futhi nokugwema amaphutha noma izinkinga maqondana nokuphepha, le nqubo izokwenziwa lapho uhlelo lungasebenzi. Okwenza konke kube lula futhi kunethezeke ngokwengeziwe ngesikhathi senqubo.
Ukuthumela imiyalezo I-IRC
Izithuthukisi zifakiwe ku-edishini nasekucushweni kweseva, kanye nokufakwa kwamaseva namakamelo ale nguqulo 3.20. Uzoba nenketho yokukhetha, kusuka kuhlu lokuqala, iseva ofuna ukuyisebenzisa ngaphandle kwesidingo sokuthayipha ikheli. Ngaphezu kokulula, ukuxhumeka kweseva nakho kuyaqina ngokwengeziwe njengoba kuphonswa ngokuzenzekelayo. Ngokulandelayo, ungafinyelela kuzici zeseva kusuka kubha eseceleni.
Kulokhu inguqulo entsha yensiza eku-inthanethi ye-Polari, kube nezinguquko ezinhle, kusuka kukwazi ukunamathisela amabhlogo wombhalo bese wabelana ngawo, nokukwazi ukunamathisela izithombe ngqo ezingxoxweni ukuze zabelwane ne-Imgur.
Ngenguqulo entsha yePolari kunokusekelwa kwezimfanelo eziningi eziyisisekelo noma zendabuko ze-IRC; ukuqaliswa kwethebhu kwemiyalo ye-IRC, ukusetshenziswa komyalo we-msg nokukwazi ukuvula izixhumanisi ze-IRC. Ukuphathwa kwamaphasiwedi wesiphakeli nezinqamuleli zekhibhodi kwafakwa, ukuphathwa kangcono kwemilayezo yesimo, ukuze umsindo wengxoxo wehliswe, futhi ukuvela kohlelo kuthuthukiswe; kufaka phakathi ukugqwayiza kombhalo nebha yokufaka entsha.
Umsebenzi owenziwe ukuze iWayland isetshenziswe eGnome uthathe isikhashana. Manje usungabona ezinye izici ezinhle zalolu hlobo. Njengobuchwepheshe besizukulwane esilandelayo, iWayland izovumela ukubuka nokufinyelela ku-GNU / Linux, futhi kungasusa izingqinamba zemidwebo futhi kubeke isisekelo sezinhlelo zokusebenza eziphephe kakhudlwana. Kepha phakathi kobuhle obusha beWayland singakhomba ukuthinta kwe-multitouch touchpad, ukuqala izaziso zokukhuliswa, ukuskena kwe-kinetic, ukuhudula bese uphonsa, ukubala nje okumbalwa.
Uma ufuna ukwenza izivivinyo faka nje imenyu yezilungiselelo kusikrini sokungena ngemvume, bese ukhetha I-GNOME eWayland. Kubalulekile ukusho ukuthi ezinye izici azitholakali lapho usebenzisa i-GNOME Wayland. Phakathi kwazo: ukusekelwa kwamaphilisi wehluzo weWacom nokwabelana kwesikrini
Ukuhlela izithombe kwenziwa ukulungiswa kwamaphutha amancane nokuthuthuka okuhlukahlukene, kepha uma sikhuluma ngezinto ezintsha, izilawuli ezintsha zokuhlela zaba lula futhi zakhululeka. Kulabo abanakekela isithombe sangempela, singagcinwa ngenkathi kuhlelwa, futhi uma ufuna ukuyeka ukuhlela, kungaphinde kwenziwe ngaphandle kokuwohloka kwesithombe sokuqala. Phakathi kwezinketho ezitholakalayo zokuhlela sithola izithuthukisi zesithombe, ukulungiswa kombala, ukujikeleza kwesithombe futhi-ke, ukuhlela izihlungi zezithombe.
Kwengezwe nomsebenzi omusha, ozovumela ukuthunyelwa kwezithombe ukuthi zikwazi ukukhiqiza amakhophi wazo futhi ngaleyo ndlela zikwazi ukwabelana, ukuphrinta noma ukudala amakhophi wesipele. Phakathi kwalezi zinketho, kungasiza kakhulu ukuthekelisa isithombe ngosayizi owehlisiwe, ngomthwalo olula ku-imeyili.
Ukuze lolu hlelo lokusebenza ezimbalwa ukuthuthuka okuhlose ukwethula nokucwengwa. Izinkinga zokusebenza nezokusebenzisana zenziwe ngcono; leyo ebucayi futhi esheshayo. Sithola izihlungi zokusesha ezilungiselelwe kakhulu, ngaphezu kokuba lula ukuzisebenzisa kunalezo zenguqulo yangaphambilini.
Amafayela acijile futhi aqondakala kalula maqondana nengxoxo yezintandokazi. Ukulungiswa kufakiwe ekwakhiweni kwezixhumanisi ezingokomfanekiso, nokwakhiwa kosesho oluphindaphindwayo. Kuzoba khona uphawu lokususwa unomphela kwefayela nezithonjana zikhudlwana kancane. Ekugcineni, izinga elengeziwe lokusondeza lafakwa ekubukweni okuhlukile, igridi nohlu.
Manje izilawuli zemidiya zisendaweni yesaziso / iwashi. Okusiza ukusetshenziswa kwezicelo zomculo namavidiyo ezisenqubweni yamanje. futhi izilawuli zezinhlelo zokusebenza zemidiya ezahlukahlukene ezisetshenziswa ngasikhathi sinye, zingabongwa ngendlela efanayo nezinhlelo zokusebenza.
Izilawuli zibonisa igama lomculi lengoma. Ukudlala kungamiswa, kuqaliswe kabusha, kanye nokweqa ithrekhi, phambili naphambili. Konke kungaphansi kwezinga le-MPRIS.
Kwi-Gnome 3.20 izinhlelo eziningi zinokufinyelela okuqondile windows; amafayela, izithombe, amavidiyo, i-gedit, umakhi, njll. Kuzo zonke izinhlelo zokusebenza, iwindi lokufinyelela eliqondile lingavulwa kumenyu yohlelo lokusebenza noma kusetshenziswe izinkinobho ze-Ctrl + noma isinqamuleli se-Ctrl + F1.
Lezi windows ezinqamulelayo manje seziyindlela yokuthola ulwazi mayelana nezinqamuleli zohlelo lokusebenza. Ngayinye yalezi windows iphethe ukufaka kuhlu izinqamuleli zekhibhodi nomphumela wokuthinta okuningi wezinhlelo zokusebenza nayo yonke imisebenzi yazo. Ungathola usizo nokusesha amakhasi ngokuzulazula, okuzokwenza kube lula kuwe ukuthola izinqamuleli lapho uzidinga.
Ekugcineni, kufanele wazi ukuthi umakhi manje angakha i-XDG-Apps, ithuluzi elingafakwa kusuka kusoftware ye-GNOME. Lokhu akuyona into eqhuba kuphela ukusatshalaliswa kwezinhlelo zokusebenza zedeskithophu, kepha futhi nokwenziwa kwazo.
IGnome 3.20 iza kithi nezindaba ezinhle kakhulu. Udinga nje ukuwazisa futhi uzijabulise ngokwakho. Njengolwazi olungeziwe kusukela ngoMashi 29, iGnome izofakwa njengedeskithophu ezenzakalelayo yeFedora 24. Ngakho-ke ngeke kudingeke ulinde isikhathi eside ukuze uzame!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Yini okusha in Gnome 3.20
Kuhle, ubuphakade obungapheli sekwephuzile.
Kepha njengoba ngizimisele, bengilindele okungenani okungu-2 kwalolu shintsho kusuka enguqulweni engu-3.14 noma engu-3.16, empeleni bebesusa ezinye izinto okuthi noma ngingazisebenzisi nsuku zonke, ziyangikhathaza lapho ngizidinga. Isibonelo, ukusondeza kwezithonjana zefolda obekunamandla phambilini, manje kunosayizi abathathu kuphela. Uma ngabe okungenani babhekana nezengezo eziphula inguqulo ngenguqulo, zizokwenza izinto zikhululeke kakhudlwana konjiniyela nabasebenzisi.
Ngihlela ukushintshela ku-gnome (ubuntu) futhi ngifisa ukwazi ukuthi le nguqulo izokhishwa nini nokuthi kuncono yini ukulinda isikhashana ukuyifaka
Ngingumlandeli KAKHULU we-gnome futhi kubonakala kimi ukuthi le nguqulo ithembisa UKUPHAKATHI KAKHULU selokhu kwavela iGnome-Shell ekhazimulayo nengalingani.
Ungathola kanjani ukuthi yimaphi amaphakheji owafakile kukhompyutha yakho